Fandraisana ny fiverenan’ny Filohan’ny Antenimierandoholona Tompon-toerana teto amin’ny Lapa Maitso Anosikely – Sénat de Madagascar
Fandraisana ny fiverenan’ny Filohan’ny Antenimierandoholona Tompon-toerana teto amin’ny Lapa Maitso Anosikely
February 4, 2019 Michel Hervey ANDRIANIRINA
Ny zoma 18 janoary 2019 teo no niverina nandray ny toerany amin’ny maha Filohan’ny Antenimierandoholona azy Andriamatoa Rivo RAKOTOVAO, rehefa avy nisahana ny andraikitra maha Filoham-pirenena mpisolo toerana nandritra ny efa-bolana mahery. Nandray azy teto amin’ny Lapa maitso Anosikely ireo Loholona sy mpiara-miasa aminy, nitarika azy ireo tamin’izany ny Filoha mpisolo toerana RANDRIAMBOLOLONA Mananjara.
Betsaka ny lalana nodiavina na dia kely aza ny fotoana matoa tonga amin’izao ny firenentsika hoy ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO, ny fanajana ny tany Repoblikanina no mahatonga izany hoy ihany izy. Hoan’ny Antenimierandoholona dia ny fanajana ny hevitry ny hafa no zava-dehibe na dia misy aza ny tsy fitovian-kevitra mba hisian’ny filaminana sy ny fampandrosoana.
Ny Filoha nisolo toerana RANDRIAMBOLOLONA Mananjara kosa dia nisaotra azy tamin’ny nahatontosany ny andraikitra izay nomena azy nandritra ny naha Filoham-panjakana an’Andriamatoa Rivo RAKOTOVAO, nahavitana ny fifidianana Filohan’ny Repoblika sy ny fanehoana ny tany tan-dalàna. Satria hoy izy na dia sarotra aza ny lalana nodiavina dia nizotra antsakany sy andavany ny raharaham-pirenena.